Filtrer les éléments par date : dimanche, 12 mai 2019
dimanche, 12 mai 2019 22:57
Ankazomanga - Antananarivo: Voasambotry ny polisy ireo andian-jiolahy mpangalatra bisikileta sy “scooter”
Ravan'ny Polisy avy ao amin’ny “Poste de Police PPA4” Antaniavo Antohomadinika – Antananarivo androany Alahady 12 Mey 2019, tamin’ny 5ora hariva, teo amin’ny toeram-pisotroana (BAR) iray akaikin'ny Jovena Ankazomanga ny andian-jiolahy mpangalatra bisikileta sy “scooter” eny amin'ireo BAR sy Karaoké manodidina an'Ankazomanga, Antanimena sy Antohomadinika iny.
Miandry olona mitondra moto na bisikileta hiditra BAR na Karaoké ireo jiolahy, ary raha tsy mahafantatra ilay olona dia miseho ho toy ny mpiambina ny “Parking mihitsy” ireo jiolahy. Rehefa izay dia tsikilovin’ireo jiolahy raha toa ka mamo na tena variana ilay tompon’ny bisikileta na “scooter” dia afindrany moramora ary entiny avy hatrany.
dimanche, 12 mai 2019 22:46
Ampanefena – Vohémar: Afisy goavambe no napetak’ilay kandida depioten’ny IRD
Manao tany lavitr’andriana ka dia ankitsirano tsotra izao ny nametahan'ilay kandida solombavambahoaka an’ny “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” ity aty amin’ny Distrikan’i Vohémar ny afisy fampielezankeviny teo an-tokontanin'ny Kaominina teto Ampanefena.
Nanao ranolava ny fanankianana am-bava sy tamin’ny tambazotran-tserasera facebook an’ity kandida ity, milaza fa mbola kandida aza izy izao no ataony mainka fa tonga eny Tsimbazaza. Nisy akony izay tsikera izay, satria nesorina ny atoandro teo ilay sary goavambe.
dimanche, 12 mai 2019 22:32
Ambanja: Hakatona ny MBS ?
Mihazakazaka ny toe-draharaha eto Ambanja renivohitr'i Sambirano taorian’ny nampidiran’ny Fanjakana am-ponja an’i Ali Sarety, filohan’ny fikambanana “Zanak’Ambanivolo Miray” nanomboka ny harivan’ny zoma 10 mey 2019.
Velon-taraina ireo mpikambana ary tezitra mihitsy aza ny sasany, izay nivory maika ny sabotsy teo, manoloana ny famonjana ity raiamandreny izay tena mijoro miaro ny tantsaha, indrindra ny mpamboly lavanila. I Ali Sarety hoy izy ireo dia olona miady ho anay tantsaha manoloana ny firongatry ny halatra lavanila, mitaky ny hamoahana ny daty hisokafan’ny tsenan’ny lavanila, izay efa tena matoy ary mampirongatra ny halatra sy ny asan-jiolahy.
Loharanom-baovao maro etsy andanin’izany no mitatitra fa misy “be hatoka” mahazo tombony amin’io tsy mbola isokafan’ny tsenan-davanila aty amin’ny faritra Sambirano io, satria manararaotra mividy antsokosoko amin’ny vidiny mora ny lavanila “halatra” izy ireo hanenjehana “quota” na lanja amam-polony taonina dia ny tantsaha mpamboly no mitondra faisana miaritra ny asan-dahalo.
dimanche, 12 mai 2019 19:28
Ampamatanana: Manohana ny tanora sy ny fanatanjahantena i Rastany
Nampisehoan'ny tanora teto Ampamatanana ny fisaorana an'i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, mitondra ny laharana faha 9 amin'ny bileta tokana.
Izany dia noho ny fanohanany ny fanatanjahantena, na baolina kitra izany, na ny lalao baolina lavalava, na ny tsipy kanetibe, ny Kick boxing. Porofon'izany ny kilioba notohanany no nahazo ny tompondaka kick boxing izay natao tany Manakara.
Nihaloavana fifaninana baolina kitra moa ity fihaonana teto Ampamatanana ity.
Hafaliana no nandraisan'ny mponina eto Morarano an'Irmah Naharimamy, Kandida ho solombavambahoaka, natolotry ny antoko politika Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, laharana faha 8, eto Toamasina I.
Vory ny zaza amam-behivavy, notronin'ireo tanora sy ray aman-dreny, nandray ity reny ity, araky ny teny fandraisana nataon'ireto mponina ireto. Maro ireo mitonina hitondra fandrosoana ho anay hoy ny solotenan'izy ireo, fa Irmah Naharimamy irery no kandida hitondra fandrosoana miaraka amin'i Filoha Andry Rajoelina.
Nanentana ny rehetra Irmah Naharimamy hiaraka hientana ampandroso an'i Toamasina, isika vehivavy hoy izy dia manana andraikitra lehibe na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiaraha-monina, indrindra eto amin'ny Firenena.
dimanche, 12 mai 2019 18:39
Lanto sy Jaojoby: Akaiky ny mponina Ambanidia sy Mahazoarivo
Anjaran'ny Ambanidia sy Mahazoarivo inndray no nitsidihan'i kandida laharana 01, Lanto Rakotomanga sy Jaojoby Eusèbe, izay lisitra natolotry ny antoko politika, Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, ato amin'ny Boriborintany faha II.
Anisan'ny fahasahirana ny tsy fisian'ny herinaratra tao amin'ny tsenan'Ambanidia, ora vitsy monja anefa dia naverina tamin'ny laoniny izany herinaratra izany, satria isika tsy naman'ny mihemotra fa mandroso hatrany hoy Lanto Rakotomanga, ary izay tenenina dia tsy maintsy tanterahina.
Anisan'izany koa ny paompy tsy nandeha intsony nandritry ny volana maro, 3 ireo paompy ary nosokafana avy hatrany. Nojerena ihany koa ireo jiro manazava ny elakelantrano rehetra, ary ho ampirehetina avokoa hoy ireto farany.
dimanche, 12 mai 2019 17:34
Masy GOULAMALY: Niara-nientana i Tsihombe
Toy ny olon-tokana i Tsihombe ny zoma teo nandray an'i Masy Goulamaly, kandida ho solombavambahoaka, mitondra ny laharaha faha 06 eto Tsihombe.
Feno hipoka ny kianja fanaovam-baolina, tsy omby ireo solotena marobe avy amin'ireo Kaominina 9 manodidina eto amin'ny Distrikan'i Tsihombe, nahatratra 20 000 mahery.
Taorian'ny fanomezana tso-drano nataon'ireo Olobe dia nitanisa ireo ASA vita nandritra ny 5 taona naha solombavambahoaka azy i Masy Goulamaly.
Taorian'izay dia nanolotra ireo vina ho fampandrosoana ny 5 taona manaraka. Tsy latsa-danja amin'izany ny sosialy, ny rano sy ny ady amin'ny kere aty atsimo, ireo fotodrafitrasa toy ny lalana, ny sekoly, ny fitsaboana, ny fisitrahana ireo harena maro aty amin'ny faritra, mba tena ho fanoitra ampandrosoana ny faritra izy ireny, ny fampiroboroboana ny tanora sy ny vehivavy. Tsy adinony ireo zokiolona.
dimanche, 12 mai 2019 17:21
Ampanefena – Vohémar: Manjaka ny gaboraraka
Mibaribary ny gaboraraka amin’ny fitaterana. Vitsy amin’ireo misehatra amin’izany no manana fahazoan-dalana hamily, sady taingimbe, nefa dia miasa tsy amin’ahiahy.
Ao an-tsena indray dia ao anaty lalana ny mpivarotra no mamelatra entana ary dia mandeha ho azy, isan'andro ny fitakiana haban-tsena amin’ireo mpivarotra.
dimanche, 12 mai 2019 17:14
Ankiranomena Dabolava: “Quartz” milanja 10 taonina tsy ara-dalàna nogiazana
Kamiao iray nitatitra vatosoa (quartz) milanja 10 taonina avy any Ankiranomena Dabolava, Faritra Menabe no voasakan’ny Zandary tamin’ny lalam-pirenena faha-34 tao Madiokely, Kaominina Dabolava, Distrika Miandrivazo, Faritra Menabe. Rehefa natao ny fisavana ny antotan-taratasy fanamarinana ny maha-aradalàna ny fitaterana ireo tomponandraikitra, dia hita fa azo avy amin’ny fitrandrahana antsokosoko ireo vatosoa ireo.
Nisy ihany koa tsy fahatomombanana hafa hita ka nitarika tamin’ny fanagiazana ny entana, izay nalefa eny Ampandrianomby-Antananarivo. Mipetraka hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny Zandarimariam-pirenena sy ny Polisin’ny harena an-kibon’ny tany amin’ny fanaraha-maso sy fandraisana andraikitra toy izao.
dimanche, 12 mai 2019 17:03
12 mai: Prière pour les Vocations
12 mai: Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Le 4ème dimanche de Pâques est proposé par l'Eglise Catholique depuis 1964 comme journée mondiale de prière pour les Vocations. Elle est célébrée depuis 1971.
Cette journée mondiale tombe le 12 mai cette année.